China Autoclave na ndị na-emepụta ụgbọ mmiri na ndị na-ebugharị ụgbọ mmiri | Ugboro abụọ Mgbaaka
Usoro autoclave Double Rings mepụtara na-enweta uru nke ngwaahịa ndị mba ọzọ yiri ya site na mmepe. Isi nsogbu autoclave mejupụtara nke nyocha ihe nwere oke na nnwale dị iche iche, meziwanye ike ike.
Egwurugwu Ime: ≥1.65m
Nrụgide Ọrụ: 1.0-1.6MPa
Operating okpomọkụ: 184-201 ℃
Ọkara Na-arụ Ọrụ: Oku Stefụ
Ngwa: Osisi Flyash na-ewu ụlọ erial Ihe Ewu, AAC Plant,
Autoclave-Onye a ma ama nke eji eme ihe na Pla Pla, Flyash Plant, Ihe Owuwu wdg.
1, ulo izizi nke ulo oru okacha amara nke ndi autoclave.
2, mmepụta akara ọgbakọ, ịgbado arụmọrụ niile, ogo na ntụkwasị obi.
3, ihe ndị nrụgide niile 100% nyocha X-ray na-achọpụta, ụzọ nchọpụta dị elu.
4, ngwaahịa dị ka ụlọ ọrụ dum, ihe dị elu ma nwee ezi uche, oge ntinye nke dị mkpirikpi, ọnụ ahịa itinye ego dị ala.
5, nke enyere nke ọma, site na ntuziaka ma ọ bụ njikwa kọmputa.
Jiri ya mee ihe:
Ngwa eji edozi uzuoku eji aka gi me ihe, enwere ike iji ya mee brick nke edo edo wuru ura, efe brick, ihe ndi ozo di nkuku, ogwe osisi di elu, pipe na ngwa ahia ndi ozo, kamakwa maka osisi, ogwu, ulo ogwu, iko, mkpuchi ihe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Usoro Nchekwa onwe
Ndepụta Nzuzo Bụ Isi nke Teknụzụ
NlereanyaIhe FGZCS1.0-1.65x21 FGZCS1.3-2x21 FGZCS1.3-2x22 FGZCS1.3-2x26 FGZCS1.3-2x27.5 FGZCS1.3-2x30
Okpomoku Okike ℃
Na-arụ ọrụ Pressure Mpa
Arụ Ọrụ okpomọkụ ℃
Na-arụ ọrụ Ọkara
Steam na-eju afọ, mmiri nwere mmiri
N'ime ụzọ ụgbọ elu Anyam
Olu nke oma M3
Nnukwu Ibu Kg
N'ozuzu Akụkụ mm
NlereanyaIhe FGZCS1.5-2.68x22.5 FGZCS1.5-2.68x26 FGZCS1.5-2.68x39 FGZCS1.5-2.85x21 FGZCS1.5-2.85x23
NlereanyaIhe FGZCS1.5-2.85x24 FGZCS1.5-2.85x25 FGZCS1.5-2Nwanna 85x26 FGZCS1.5-2Nwanna 85x26.5 FGZCS1.5-2Nwanna 85x27
NlereanyaIhe FGZCS1.5-2.85x29 FGZCS1.5-2.85x36 FGZCS1.5-3x23 FGZCS1.5-3x31 FGZCS1.5-3.2x24.5
Nnukwu Ibu Kg 58400
N'ozuzu Akụkụ mm 30634x3640x4495 37634x3462x4495 24875x3516x4804 32875x3516x4804 26570x3750x5027
Nke gara aga: AAC Autoclave na Boiler
Osote: SZS ikuku mkpuchi ikuku ejiri ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ
autoclave maka ọrịre
autoclave ulo oru
autoclave nwoke ịga ụlọ ọgwụ okpomọkụ
egbu egbu egbu egbu
klas b autoclave
SZS Gas Mmanụ PLG mmanụ ụgbọ mmiri
Okwu Mmalite: SZS usoro ji esi mmiri ọkụ ahụ bụ ogologo 2-drum, ụdị D-ụdị combustion strueture. Ọkụ dị n'akụkụ aka nri ma ọkpọ nkụ nke ebu mmiri dị n'akụkụ aka ekpe. A na-edozi ahụ ahụ na chassis ahụ site na nkwado na-agbanwe agbanwe n'etiti na nsọtụ abụọ nke obere ịda ahụ, nwere ike idobe iji hapụ ahụ ọkụ ọkụ niile ka ọ gbasaa n'akụkụ. N'elu ọkụ enwere oghere akpụkpọ ahụ dị warara ikuku mgbidi. A na-emechi ya kpamkpam ma kewapụ ya n’etiti mgbidi akpụkpọ ahụ na oke aka ekpe na c…